Xubno Al-shabaab u Qaabilsanaa Dilalka Qorsheysan Oo Lagu Soo Bandhigay Degmada Wadajir – Goobjoog News
Maamulka degmada Wadajir iyo taliska ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa saldhigga degmadaasi waxay kusoo bandhigeen Saddex nin oo la sheegay iney Al-shababa u qaabilsanaayeen dilalka qorsheysan iyo sidoo kale kala gudbinta hubka.
Raggan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen iney ka mid yihiin Al-shabaab, lana soo qabtay xilli ay dil fulin rabeen.
Waxa ay sheegeen in markii lasoo qabanayey ay dili rabeen Haweeney ka mid ahayd ergadii soo doortay xildhibaannada golaha shacabka, islamarkaana Khaad ku iibineysay beerta Khaadka ee magaalada Muqdisho.
Raggan ayaa sheegay iney qirsan yihiin iney qaladaad sameeyeen, balse waxay dalbadeen in la cafiyo.
Dhanka kale, guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, Maxamed C/laahi Tuulax oo halkaasi warbaahinta kula hadlay wuxuu sheegay in cadaaladda la horgeyn doono raggaasi.
Tuulax ayaa dhanka kale uga mahadceliyey ciidanka Booliiska ee gacanta kusoo dhigay raggaasi.
Dil Ka Dhacay B/weyne